Ny fiakaran'ny varotra finday sy ny tombony ho an'ny mpivarotra | Martech Zone
Alarobia, Novambra 20, 2013 Alarobia, Novambra 20, 2013 Kelsey Cox
Ankehitriny ny mpanjifa dia afaka manao fividianana an-tserasera amin'ny fotoana rehetra, ary amin'ny toerana rehetra misy signal na wifi amin'ny finday, ireo orinasa mahomby indrindra dia manatsara ny sehatra findainy mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifany. Taona vitsy lasa izay, nanomboka nieritreritra ireo mpivarotra am-barotra fa fomba efa ho faty ny marketing amin'ny mailaka, saingy ny fiakarana vao haingana M-varotra manaporofo ny mifanohitra amin'izany.
Raha ny marina, isaky ny $ 1 ampanjariam-bola amin'ny marketing mailaka, ny salan'isa dia $ 44.25, ary dimam-polo isan-jaton'ny fanokafana tsy manam-paharoa ho an'ireo tranokala mpivarotra no miseho amin'ny finday finday sy ny takelaka. Ny mpanjifa finday dia mandany 48% amin'ny fotoanany amin'ny tranokala e-commerce, miaraka amin'ny dolara e-varotra 1 amin'ny 10 lany amin'ny alàlan'ny smartphone na tablette. Tamin'ny 2013, ireo orinasa manangona vola be indrindra amin'ny varotra finday dia Apple, Amazon, QVC, Walmart, ary Groupon Goods, manaporofo fa azo averina miaina indray ny marketing amin'ny mailaka raha manome traikefa miavaka amin'ny finday ny mpivarotra.
Baynote sary an-tsaina hoe lasa matanjaka tokoa ny varotra finday, amin'ny sary eto ambany.
Tags: ecommerceSary torohay-barotraFivarotana finday sy tablettefifanakalozana finday
Ny tombony azo avy amin'ny mailaka namboarina